Tallaabooyin cusub oo loogu talagalay Coronavirus ayaa ku yaal Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTallaabooyin cusub oo loogu talagalay imaatinka Coronavirus ee Ankara
23 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, TURKEY
Digtooni cusub oo loogu talagalay coronavirus ayaa ku taal Ankara
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa tallaabooyin ay ka qaaddo la dagaallanka coronavirus. Iyada oo la raacayo tilmaamaha Duqa Magaalada Mansur Yavas, waxaa la soo saaray go'aamo cusub oo digtooni ah. Bixinta adeegyada nadaafadda iyo nadaafadda aagga karantiil ee Gölbaşı laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay, Büyükşehir wuxuu sii wadaa taageerada nolosha aadanaha iyo agabka nadaafadda iyo nadaafadda. Si looga hortago faafitaanka faafa iyo in la ilaaliyo caafimaadka muwaadiniintayada ka weyn da'da 65, isticmaalka bilaashka ah ee dhammaan gaadiidka dadweynaha ee ka weyn da'da 65 ayaa si ku meel gaar ah loo joojiyay ujeedooyin taxaddar. Shaqaalaha caafimaadku waxay ka faa'iideysan karaan basaska EGO, Metro iyo ANKARAY oo lacag la'aan ah iyagoo muujinaya aqoonsigooda. Bas bas ah oo bilaash ah ayaa loo qoondeeyay shaqaalaha caafimaadka ee tagaya Isbitaalka Magaalada Ankara ee Bilkent. Kooxaha nadiifinta magaalooyinka waaweyn; Metro, ANKARAY iyo basasku waxay sii wadayaan howlahooda wasakhda ah ee ku-meel-gaadhka ah ee dolams iyo tagaasida.
Ayadoo la waafajinayo tilmaamaha Duqa Magaalada Ankara Mansur Yava measures, waxaa la hirgaliyay talaabooyin iyo talaabooyin cusub oo sababay dillaaca coronavirus (Covid-19).
Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso 7/24 marka loo eego la-dagaallanka cudurrada faafa ee dhammaan caasimadda.
TAAGEERADA LOGISTIC EE KARANTINA REGION
Ka sokow sii socoshada howlaha nadaafadda iyo nadaafadda ee ka jira aagga karantiil ee Gölba the, waaxda arrimaha caafimaadka ayaa sidoo kale gobolka ka siisa taageero maadi ah oo xagga nolosha ah.
Bixinta 4 xamuul oo waaweyn oo daawooyin ah iyo agab taageero nolosha ah oo ka socda aaladda ECG illaa heerkulbeega, maaskaro ilaa duriyaha, Dawladda Hoose ee Magaaladda ayaa haysa 200 oo shaqaale gobolka. Seyfettin Aslan, madaxa waaxda arimaha caafimaadka, wuxuu cadeeyay in ay taageero siinayeen hoyga Gölbaşı, halkaasoo muwaadiniintii rajadu ka timid, la taageeray ilaa maalintii ugu horeysay ayna wadaagaan macluumaadka soosocda:
“Anaga Madaxtinimada Ankara ee Magaalada Ankara, waxaan halkaan ula joognaa kooxdeena oo dhan tan iyo markii la wareejinayo muwaadiniinta rajadooda timid. Taageeradeena ayaa sii socota. Waxaan xiriir joogta ah la leenahay gudoomiye ku xigeenada ay quseyso. Anaga oo ku mataleyna Magaala-weyn, waxaan u magacownay saaxiib maamulaha waaxdayada qaybta miiska dhibaatada halkan. Halka ugu hooseysa ee lagu dhammaystirayo cilladaha halkan, taageerada magaaladu waxay ka sarreysaa gobolkan. Maanta, waxaan halkan u joognaa inaan la kulanno nadaafadda, jeermis-diidka iyo baahiyaha maalinlaha ah ee dhammaan 1500 qol. Waxaan u imid kaalmadeena bini'aadanimo, oo ay ku jiraan in kabadan tan oo walxaha sifeysan, in ka badan ton tan oo warankiilo ah, in kabadan 12 kun oo maaskaro ah, in kabadan 12 kun oo galoofis, 2 kun oo isugeyn ah, aaladaha jeermiska kafeega. Waxaan isku dayeynaa inaan ka soo baxno dalabaadka gudoomiye ku xigeenada sida ugu dhaqsaha badan. Ku xigeenada gudoomiyeyaasheeda ayaa sidoo kale u mahadceliyay Duqa Magaalada Mansur Yavas iyo Dowlada Hoose ee Magaalada. ”
QASHINKA KANTAANKA AYAA KA DHACAYA 100 DHAMMAAN
Aslan wuxuu cadeeyay inay qashinka ka dhigayaan aaga karantiil sidii qashin caafimaad. ”Dowlada hoose ee Ankara waxay aqbashay qashinka gobolkaan inuu yahay wasakh caafimaad. Qashinka gobolkaan waxaan ku gubnaa kun 100 digrii. Muwaadiniinteenna waa inaysan ka walwalaan. Annaga oo ah Dawlada Hoose ee Magaalo Weyn, waxaan dhammaan noocyo kala duwan oo taageero iyo adeeg ah siinnaa gobolka karantiil. ”
WAC KU SOO GUDBINTA Muwaadiniinta 65 sano jira iyo wax ka weyn
Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş wuxuu go’aansaday inuu si ku meelgaar ah u joojiyo dhammaan muwaadiniinta 65 sano jirka ah si lacag la’aan ah si uu uga faa’ideysto dhammaan gaadiidka dadweynaha kadib markii ay ugu yeeraan Ankara inay guryahooda joogaan si looga hortago cudurada faafa iyo coronavirus-ka isla markaana looga hortago viruska inuu fido. Waxaa la helay.
Duqa magaalada Yavaş wuxuu tilmaamay in intii u dhaxeysay maalmihii 16-20 Maarso, celcelis ahaan 65 kun 55 muwaadiniin ah oo da’doodu tahay 739 sano iyo wixii ka weyn ay adeegsanayeen gaadiidka dadweynaha, qodobka 5393aad ee Sharciga 38 65 ee cinwaankiisu yahay “Waajibaadka iyo awooda Duqa,” qodobka “Nabadda dadka magaalada, Marka loo eego taxadarka qaadashada taxaddarrada lagama maarmaanka u ah fayoobaanta, caafimaadka iyo farxadda ”, waxay si ku-meel-gaadh ah u joojisay adeegsiga dhammaan gaadiidleyda dadweynaha si lacag la’aan ah muwaaddiniinta ay da'doodu ka weyn tahay XNUMX sano ujeeddooyin taxaddar leh marka la eego tallaabooyinka la qaaday si loo ilaaliyo caafimaadka guud.
LACAG LA'AAN AH OO CAAFIMAAD CAAFIMAAD
Waxaa ku dhawaaqay Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara in shaqaalaha caafimaadku ay ka faa iideysan karaan gawaarida gadiidka dadweynaha oo lacag la’aan ah iyagoo muujinaya aqoonsigooda.
Iyada oo qayb ka ah la dagaallanka coronavirus, shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa hadda awoodi doona inay u adeegsadaan basaska EGO, Metro iyo ANKARAY lacag la’aan.
Iyada oo la raacayo tilmaamaha Madaxweyne Yavaş, ka sakow arjiga gaadiidka dadweynaha ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka, Isbitaalka Magaalada Ankara 112 ee loogu talagalay shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa sidoo kale loo qoondeyn doonaa adeegga baska saacaddiiba.
Adeegga Xirfadleyda Daryeelka Caafimaadka ayaa lagu qori doonaa qormooyinka basaskayaga oo lagu tusi doono iyadoo la muujinayo aqoonsiga xirfadlayaasha daryeelka caafimaad.
Basasku waxay ku laaban doonaan wadada Eskişehir saacad walba, laga bilaabo 22.03.2020, saacadu markay tahay 07.00 aroortii, iyagoo ka bilaabaya Cisbitaalka Magaalada, Kızılay, Sıhhiye, Opera, Ulus horteeda baarlamaanka iyo wadada Konya. Gazi Hospital AŞTİ iyo AŞTİ ayaa soo yeeraya faraan sidii Isbitaalka Magaalada markale.
Kaliya shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya Isbitaalka Magaalada ayaa qaadan doona basaska iyagoo muujinaya aqoonsigooda mana jiri doonaan rakaab kale.
WAA KU SAABSAN SHAQAALAHA KU SAABSAN TAXI IYO DIIWAANKA DIIWAANKA
Ku shaqeynta Waaxda Ilaalinta iyo Xakamaynta Deegaanka, BELPLAS A.Ş. Kooxaha nadaafadda waxay sii wadaan howlaha ka-takhalusidda ee tagaasida iyo basaska maalin walba, tilmaamaha Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş.
Waxyaabaha ka-hortaga jeermiska, ee ka sii socda tagaasida iyo minibus-ka ee joogsanaya dhammaan caasimadda, waxaa xukuma kooxaha Qaybta Booliska.
Amiir Sevinç, oo ka shaqeeya Saldhigga Taksiga ee Sincan Yenikent, wuxuu yidhi, “Waxaan uga mahadcelineynaa Madaxweynahayaga Mansur taageerada ay muujiyeen. Rakaabkeenu sidoo kale aad bay ugu faraxsan yihiin codsigan annaga noo ah darawallada. Wax cabasho ah kama heleyno. ” Darawal Taksiile Ali Özçelik ayaa yiri, “Aad ayaan ugu faraxsanahay adeegan Magaala-weyn. Waxaan rajeyneynaa inaan badbaadi doonno maalmahan. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin Madaxweynahayaga Mansur. ” Murat Cebe, oo ah ganacsade taksiile kale oo taksiilaha ka gooyay Sincan Pleven Taxi Station, ayaa yidhi, "Aad ayaanu ugu faraxsan nahay dalabka. Ilaahay ha ka raalli noqdee Magaalo-Weyne iyo Duqa Magaalada. Waxaan sii wadaynaa adeeggeenna. Waxay sidoo kale naga caawiyaan dhammaan noocyada arrimaha. Ilaahay ha barakeeyo dhammaantood. ”Wuxuu muujiyey sida uu ugu qanacsan yahay.
Isagoo sheegay inay ka shaqeynayaan Mamak Ege Mahallesi Dolmus Bus Stop, Yiğit Yılmaz wuxuu yiri, "Waxaan ka shaqeynayay istaaggan 8 sano. Waxaa mahad leh Duqa Magaalada, waxay gacan weyn ka gaysteen nadaafadda gawaarida. Gawaaridayaga waa la jeermisyaa maalin walba. Waxaan ku dadaalnaa nadaafaddeena intii karaankeenna ah, ”ayuu yiri darawalada basaska ee ka faa'iideystey adeegga ayaa yiri:
Kubilay Cihan:“Marka hore, waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelino Duqa Magaalada dhaqankan. Gawaaridayagu waa mid loo kala jaba caafimaadka mid rakaabkeena ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay adeeggan. "
Cengiz Koç: “Waxaan anigu ahaa darawal bas yar bas ah muddo 35 sano ah. Waa markii ugu horreeysay ee aan nimaadno wax sidan oo kale ah. Waxaan muujineynaa dadaalkeena ugu wanaagsan. Codsigan wuxuu aad ugu fiican yahay ilaalinta caafimaadka rakaabka iyo wadayaasha. "
Basaska Cusub ee Samsun | SAMULAŞ
Qaybta Ka Hortagga cusub ee Iron iyo Steel
Diyaargarawga Ammaanka Duulimaadka waxaa laga qaadaa Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul
Wasaaradda Gaadiidka Dawlada: Gacanka Crescent-Çayyolu Metro
TCDD 6.Alo 131 ee Waaxda
Isticmaalka xariiqda YHT ee Istanbul-Eskisehir ayaa la hawlgalaa kadib markii 1.5 bishii
Gaadiidka curyaanka ah ee naafanimada leh ee Gaziantep
Farsamooyinka Gawaarida Tareenka Waxay ka shaqeysaa 2017
3. Jidadka isku xira wadooyinka ee ra'iisal wasaaraha
Isbitaalka Magaalada Ankara